तरुण दलको प्रर्दशनमा प्रहरीको लाठी चार्ज - राष्ट्रिय - Radio Kantipur
तरुण दलको प्रर्दशनमा प्रहरीको लाठी चार्ज
डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै सोलिडारिटी फर प्रोफेसर गोविन्द केसी अलाइन्सले काठमाडौंमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । नयाँ बानेश्नवरमा नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले भाषण गरिरहेको बेला प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको हो । यस्तै, तरुण दलले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठी चार्ज र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ ।
बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको भन्दै प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको हो । झडपमा तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेतसहित केही घाइते छन् । माइतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको र्‍याली बानेश्वर पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो । विगत २२ दिनदेखि अनसनरत डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, अधिकारवादी, चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरू सहभागी छन् ।
र्‍यालीमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र, त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा केदारभक्त माथेमा, मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, अभिनेत्री करिष्मा मानन्धर, मनिषा कोइराला लगायत छन् ।
यसबीच, डा.गोविन्द केसीले सरकारी तवरबाट कुनै पनि किसिमका स्वास्थ्य जाँच र सुविधा नलिने अडान लिनुभएको छ । स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकुल रहँदा समेत डा केसीले कुनैपनि स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गर्न नमानेको डा केसीका सहयोगी डा. विशाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
दाहालले भन्नुभयो, 'डा केसीले सामान्य रक्तचाप परिक्षण गर्न पनि अस्विकार गर्नुभएको छ ।' काठमाडौ आएकै दिन मुटुको अवस्थाबारे जाँच गरि डा.केसीलाई सीसीयूमा लाने तयारी थियो तर जाँच गर्न नै अस्वीकार गरेका कारण उहाँको पछिल्लो स्वास्थ्य स्थिति बारे जानकारी लिन समस्या भएको डा. दाहालले बताउनुभयो ।